GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
WEREGODỊ ya na i nwere otu ezigbo enyi ị tụkwasịrị obi. Otu ụbọchị, ya emee otu ihe juru gị anya, ị ghọtakwanụghị ihe mere o ji mee ihe ahụ, ndị mmadụ ebidokwa na-ekwu okwu ọjọọ gbasara enyi gị ahụ, na-ekwu na obi tara ya mmiri. Ị̀ ga-ekweta ozugbo na enyi gị ahụ bụ onye ọjọọ n’ebughị ụzọ jụọ ya ihe mere o ji mee ihe ahụ? Ọ bụrụkwanụ na ọ nọghị nso ka ọ gwa gị ya, ị̀ ga-agbachi nkịtị ma ghara ikwu na ọ bụ onye ọjọọ?
Tupu gị ana-ekwu ihe ọ bụla, ị ga-ebugodị ụzọ chọpụta ihe ụfọdụ dị mkpa. I nwere ike ịjụ onwe gị, sị, ‘Gịnị na gịnị ka m ma banyere enyi m ahụ? Oleekwa ihe mere m ji tụkwasị ya obi?’ Ọ bụrụ na i mee otú ahụ, i metara ya. Ọ̀ bụ na anyị ekwesịghịkwa ime otu ihe ahụ tupu anyị ekwuo na obi tara Chineke mmiri?
Nke bụ́ eziokwu bụ na e nwere ihe ụfọdụ Chineke mere bụ́ ndị ị na-agaghị aghọta ihe mere o ji mee ha. O nwekwara ike iju gị anya na ọ hapụrụ ihe ụfọdụ ka ha na-eme. E nwere ọtụtụ ndị ga-agwa gị na obi kpọrọ Chineke nkụ, ha ga-achọkwa ka i soro ha na-ekwu na Chineke bụ onye ọjọọ. Ị̀ ga-ebu ụzọ chere ka ị mata onye Chineke bụ nke ọma tupu gị ekwuo na ọ bụ onye ọjọọ? Ọ bụ otú ị maruru Chineke ga-ekpebi ihe ị ga-eme. Jụọ onwe gị, sị: ‘Olee ihe ọma ndị Chineke meerela m?’
Ọ bụrụ na i nweela ọtụtụ nsogbu ná ndụ, o nwere ike ịdị gị ka ọ̀ bụ na o nwetụbeghị ihe ọma Chineke meere gị. Ma, chegodị echiche. Ọ̀ bụ Chineke kpataara gị nsogbu ndị ahụ ka ọ̀ bụ ya na-emere gị ihe ọma ndị na-eru gị aka? Dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ bụ Setan “na-achị ụwa a,” ọ bụghị Jehova. (Jọn 12:31) N’ihi ya, ọ bụ Setan na-akpata ọtụtụ nsogbu na mmegbu ndị anyị na-ahụ n’ụwa. Ọ́ bụghịkwa eziokwu na ọtụtụ nsogbu anyị na-enwe n’ụwa bụ maka na anyị ezughị okè, ọzọ abụrụ na ihe ọjọọ ndị anyị na-atụghị anya ha na-adabara anyị?
Ọ̀ bụ Chineke kpatara nsogbu ndị ị na-enwe ka ọ̀ bụ ya na-emere gị ihe ọma ndị na-eru gị aka?
Ma oleekwanụ ihe ọma Chineke na-emere anyị? Baịbụl kwuru na ọ bụ Chineke “kere eluigwe na ụwa,” gwakwa anyị na o kere anyị “n’ụzọ dị egwu, dịkwa ebube.” Baịbụl kwukwara na Jehova bụ “Chineke onye ume ndụ gị dị n’aka.” (Abụ Ọma 124:8; 139:14; Daniel 5:23) Gịnị ka ihe niile a Baịbụl kwuru pụtara?
Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ Chineke mere anyị ji dịrị ndụ. (Ọrụ Ndịozi 17:28) Ọ bụkwa ya nyere anyị ụwa a mara mma, mee ka inwe ezigbo ndị enyi na-atọ anyị ụtọ nakwa ka ndị ọzọ na-ahụ anyị n’anya. Ọ bụkwa ya mere ka ihe oriri na-atọ anyị ụtọ, ka anyị na-anụ ụda egwú na ụda ndị ọzọ, meekwa ka anyị na-anụ ụdị ìsì dị iche iche. (Jems 1:17) Ihe a niile Chineke meere anyị ọ̀ bụ na ha anaghị egosi na ọ bụ ezigbo enyi nke anyị kwesịrị ịkwanyere ùgwù ma tụkwasị obi?
N’eziokwu, o nwere ike isiri gị ike ịtụkwasị Chineke obi. O nwekwara ike ịbụ na ị matabeghị Chineke nke ọma, ma ya fọdụzie ịtụkwasị ya obi. Ọ bụghị ihe ijuanya ma ọ bụrụ na ọ dị gị otú ahụ. Ụlọ Nche a agaghị ezuru anyị ilebacha anya n’ihe niile mere ụfọdụ ndị ji eche na obi tara Chineke mmiri. Ma, ọ ga-abara gị ezigbo uru ma ị gbalịa matakwuo onye Chineke bụ. * Obi siri anyị ike na ọ bụrụ na i mee otú ahụ, ị ga-amata ihe bụ́ eziokwu banyere Chineke. Ajụjụ bụzi: Obi ọ̀ tara Chineke mmiri? Azịza ya bụ mba n’ihi na “Chineke bụ ịhụnanya.”—1 Jọn 4:8.
^ para. 8 Ị chọọ ịmatakwu ihe mere Chineke ji kwe ka ihe ọjọọ dịrị, gụọ isi nke 11 n’akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ị̀ Ga-atụkwasị Chineke Obi?
IHE NDỊ NA-EME KA E NWEE OBI ỤTỌ N’EZINỤLỌ Otú I Kwesịrị Isi Na-emeso Ụmụ Di Gị Ma Ọ Bụ Ụmụ Nwunye Gị Ihe
BỊARUO CHINEKE NSO Jehova Ọ̀ Hụrụ Gị n’Anya n’Eziokwu?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?
Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?
ỤLỌ NCHE Obi Ọ̀ Tara Chineke Mmiri?